Maalinta: 10-ka July, 2017
The Heart of World Railways waxay ku taala Istanbul
Wadnaha Wadooyinka Tareenka Dunidu ku garaacaan Istanbul: 90 ee Ururka Caalamiga ah ee Tareenka (UIC). Golaha Guud wuxuu ka bilaabay Istanbul. Isagoo ka hadlaya furitaanka Shirka Golaha Guud ee lagu qabtay Hilton Bomonti Hotel, Maareeyaha Guud ee TCDD iyo Madaxweynaha UIC [More ...]
Wasiirka Arimaha Dibadda, "Waxaan dooneynaa inaan dib u soo nooleeyno lineka Istanbul-Aqaba"
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa ku dhawaaqay inay qorsheynayaan dib u soo nooleynta khadka u dhexeeya Istanbul iyo Aqaba ee Jordan. Arslan, oo shalay yimid Jordan iyo wafdigii la socday, ayaa booqday Jordan oo ku taal magaalada Aqaba. [More ...]
Nabadgalyadii hore ayaa laga furay Van
Joojinta amniga hore ee Van ayaa loo furay in la istcimaalo: Dawlada Hoose ee Magaalada Caabudwaaq, isgoyska badbaadada duulimaadka gaadiid dad weynaha ayaa bilaabay in shaqadu dhamaato. Joogsiga dib loo eegay waa la heli karaa. Dayactirka iyo Dayactirka Wadada [More ...]
Khadka Nidaamka Isgaadhsiinta Oo Diiday Geeddi Socodka Kayseri
Khadka Nidaamka Tareenka wuxuu Dheereeyaa Wadada Kayseri: Nidaamka tareenka wuxuu ka hortagaa gawaarida gaarka loo leeyahay ee 10 bin 300 inay galaan taraafikada. Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri waxay keentaa ku-habboonaan iyo raaxo badan gaadiidka iyada oo la raacayo nidaamka tareenka iyo waliba taraafikada [More ...]
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Yildirim, Gebze-Halkalı Dib u eegista hawada ee khadka tareenka: Raiisel wasaare Binali Yildirim ayaa baaray dhismaha garoonka diyaaradaha seddexaad ee dhismaha iyo mashruucyo kale oo hawada ka socda. BA OBA ”Helicopter [More ...]
Wadada Eurasian-tareenka xawaaraha sare waxay ku dhammaataa tiirarka Shiinaha
Lugta Shiinaha ee wadada tareenka xawaaraha sare ee Eurasia waa la dhammeystirey: tareenka 400-kiiloomitir xawaare-xawaare sare ku maraya wadada isku xirta magaalada Shian, oo ah halka laga bilaabayo wadada taariikhiiga ah ee Silk, illaa Gobolka Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Shiinaha [More ...]
Samsun Sivas Tilmaamaha Tareenka
Wadada tareenka ee Samsun Sivas ayaa la soo ban dhigay: Mashruuca casriyeynta casriga ah ee Xunnada-Xun ee loo yaqaan '378 km-Samsun-Kalın' (Sivas) Republic of Turkey iyo Midowga Yurub [More ...]
Wasiirka Elvan ayaa ku dhawaaqay khadka Konya-Karaman YHT
Sharraxaadda khadka Konya-Karaman YHT ee Wasiirka Elvan: 2. May Wasiirka Horumarinta Lütfi Elvan, oo u yimid magaaladeena si ay uga qeybgasho Bandhigga Caalamiga ee Dalxiiska Caalamiga ah ee K andzkalesi oo booqashooyin isdaba joog ah u sameeya, wuxuu jeclaan lahaa inuu u mahadceliyo Guddoomiye Cali İhsan Su [More ...]
Xarunta Akhisar ayaa ka saari doonta dhibaatada tareenka
Xarunta Akhisar waxay ka soo kaban doontaa dhibaatadii tareenka: TCDD 3 oo ku taal Degmada Akhisar ee Gobolka Manisa. Agaasinka gobolka ee tareenka inuu ka guuro magaalada ayaa dhammaaday. Tijaabooyin cusub ayaa bilaabanaya bilowga Agoosto [More ...]
Howlaha weelasha ayaa laga bilaabay Xarunta Saadka ee Gökköy: Balıkesir waxay isu diyaarineysaa inay ka istaagto qeybta saadka. Howlaha weelasha ayaa laga bilaabay Gökköy Logistics Center ee Balıkesir, oo dhawaanahan la soo dersay horumar weyn oo ku saabsan warshadaha. [More ...]
Warshadaha warshaddu ma doonayo inuu waqti u lumiyo si loo qabto kacaanka dijitaalka ah: Maalmaha fasaxa ka hor, waaxda Kooxda Tareenka ayaa shir qabtay. juqraafiga Turkey iyo xaaladda iftiinka horumarka adduunka iyo qaybaha tareenka [More ...]
RayHaber 10.07.2017 Warbixinta Shirka
Gaadiidka Gawaarida Gawaarida Gawaadhida Gawaarida Dhammaystirka (TÜLOMSAŞ)
Tareenka xamuulka ah wuxuu ku dhacay tareen tareen oo ku yaal Malatya isagoo maraya heer-kulul, 1 ayaa dhintay
Tareenka xamuulka qaada ayaa ku dhacay isgoyska tareenka ee isgoyska Malatya, 1 ayaa dhintey: degmada Ak ofadağ ee Malatya, darawalkii gaariga wuxuu shil ku dhacay tareenka isaga gudbaya jaranjarada heerka, shaqaale ayaa ku dhaawacmay gaariga. Socdaalka Iskenderun-Malatya [More ...]
Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna safar tareen dheeri ah leh
Raiisel wasaare Yildirim wuxuu ku raacay tareen xawaare dheereeya leh: Raiisel wasaare Binali Yildirim, oo baarayey Polatli, wuxuu doorbiday Train Speed ​​Speed ​​inuu ku laabto Ankara. Ku-xigeenka Undersecretary ee UDHB Orhan Birdal safarkiisa Ankara ee Polatlı, TCDD Taşımacılık AŞ [More ...]